Izindaba - Yethula imininingwane eminingi evamile yama- guardrails kamasipala
Leli phepha lethula ukucaciswa okuningana okujwayelekile kwezinsimbi zokuqapha zikamasipala ukuze kube lula ukukhethwa kwezicaciso ezifanele ngokuya ngendawo ehlukene.
Ubude besiqephu esisodwa se- guardrail kamasipala ngokuvamile buyalungiswa. I-guardrail ngayinye ingamamitha angu-3 ubude futhi inamapayipi amancane angu-12 aqondile. Ikholomu ithatha ipayipi lesikwele elingu-80 * 80mm, ngakho ubude besethi bungu-3.08m. Umehluko phakathi kokucaciswa okuhlukene ubukhulu becala ubude be- guardrail kamasipala. Ukuphakama lapha kubhekisela kubude obusuka phezulu kwekholomu ukuya phansi ngemva kokufakwa kwe-railing. Ubude obulandelayo buvame ukusetshenziswa:
Ubude be-guardrail obungu-0.6m bungu-0.3m, obusetshenziswa kakhulu ekungeneni nasekuphumeni kwamagaraji nenxanxathela yezitolo.
Ubude be-guardrail engu-0.8m bungu-0.5m, obungahlukaniswa ngezindawo zokusebenzela kanye nezindawo zokusebenzela.
Ubude be-1.0m guardrail bungu-0.7m. Le mininingwane isetshenziswa kakhulu emigwaqweni yasemiphakathini, ezikoleni nasemapaki.
Ubude be-1.2m guardrail bungu-0.9m. Isetshenziselwa kakhulu imigwaqo kamasipala kanye nemigwaqo yasemadolobheni ukuvimbela abahamba ngezinyawo ukuthi bangaweli futhi bavimbe izibani zemizila ephambene.
Yini okufanele inakwe lapho kufakwa i-guardrail kubunjiniyela bamabhuloho
Ngesikhathi kwakhiwa i- guardrail yebhuloho, kuyadingeka ukubamba ngokunembile idatha yezindawo ezihlukahlukene, ikakhulukazi indawo enembile yamapayipi ahlukahlukene agqitshwe endaweni engaphansi. Akuvunyelwe ukudala umonakalo ezikhungweni ezingaphansi komhlaba ngesikhathi sokwakhiwa. Uma ikholomu ishayelwa ijule kakhulu, ikholomu ngeke ikhishwe ukuze ilungiswe. Isisekelo saso sizogxivizwa futhi ngaphambi kokushayela, noma indawo yekholomu izolungiswa. Uma usondela ekujuleni ngesikhathi sokwakha, amandla okusando azolawulwa.
Ngaphandle kokuthi izinsimbi namabhawodi wokunweba afakwe uthayela wediphu eshisayo, ezinye izingxenye ze- guardrail yebhuloho zizofakwa idiphu elishisayo ngaphambi kokumbozwa ngepulasitiki. Umugqa onamachashazi emfanekisweni ukugoba kwepuleti elixhumayo. Ukumelana okuphansi kwenethi yento elwa nokuwa kuyadingeka ukuthi ibe ngaphansi kuka-10. Uma yehluleka ukuhlangabezana nezidingo, inani lensimbi ye-engeli yomzimba ophansi lingakhuphuka. Ibanga lensimbi ye-angle lingu-5M futhi lixhunywe ngensimbi eyisicaba. Lapho isiphetho senethi ngayinye yento ewayo sisekelwe phansi, ukuqina kwendawo kanye nobude bensimbi ye-engeli kufanele kuncike kumanani angempela esizeni.
I-Bridge guardrail iwuhlelo lokufakwa kwezakhiwo zebhuloho nothelawayeka kanye nengxenye ebalulekile yekhwalithi yokubukeka yebhuloho nothelawayeka. Ikhwalithi yangaphakathi ye-anti-collision bridge guardrail ilele kuzinto ezingavuthiwe nenqubo yokucubungula, futhi ikhwalithi yayo yokubukeka incike enqubweni yokwakha. Ngesikhathi sokwakha, kufanele sinake inhlanganisela yokulungiselela ukwakhiwa kanye nomshayeli wenqwaba, sihlale sifingqa isipiliyoni futhi siqinise ukuphathwa kwesakhiwo, ukuze siqinisekise ikhwalithi yokufakwa kwepulangwe likathayela elivikela ukushayisana kwebhuloho.
Singakwazi ukwenza amasampula ngendlela oyifisayo ukuze uwahlole, sibheke ngabomvu ukuthola uphenyo lwakho.